Mbola Manafika Ireo Mpitarika Ao Amin’ny “Rahalahy” Afghana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2013 3:50 GMT
20 volana eo sisa dia hiala ny tafiky ny OTAN, mpitandro ny filaminana sy miaramila misahana andraikitra lehibe ara-piarovana ao Afganistana. Na dia izany, manjaka sahady ny tahotra fa mety hitombo ny herisetra ao amin'ny firenena amin'izao fanalana ny tafika vahiny amin'ny fiafaran'ny taona 2014 izao. Araka ny hita tamin'ny fanafihana narahina vono olona niseho vao haingana tao andrefan'ny tanàna Farah, mitoetra ho atahorana hatrany ny Talibana.
Tamin'ny 3 Aprily 2013, nanafika tao amin'ny fitsarana tao Farah ireo mpikomy talibana sivy, olona 46 no namoy ny ainy tamin'izany ary 100 teo naratra. Olo-tsotra sy mpitandro ny filaminana ao an-toerana no lasibatra tamin'izany. Voalaza fa ny hamotsotra ireo “vondrona gadra Talibana” no tanjon'ny fanafihana.
Fanafihana feno herisetra mahatsiravina indrindra sy miavaka tamin'ireo andianà loza niseho manerana ny firenena ity fanafihana ity, fantatra fa mbola manohy mifampiraharaha amin'ireo Talibana i Hamid Karzai, filoha Afghana. Taorian'ny loza, nihaona tamin'ny fianakavian'ireo niharan-doza ny filoha Karzai. Nikabary tamin'ireo vahoakan'i Farah izy, ary nanome tsiny ireo “mpifanolo-bodirindrina” tsy voafaritra mazava noho ny herisetra ao amin'ny firenena izy:
Noho ny fitsabahan'ireo mpifanolo-bodirindrina akaiky na lavitra no anton'izao fahoriana rehetra mihatra amin'ny Afghana izao. Tokony hihavana amin'ireo Afghana Talibana ny Afghana, saingy hitolona hanohitra ireo vahiny sy izay [manampy ny Talibana avy any ivelany] isika.
Pikantsarin'ny pejy facebook TV Tolo News nanaovana ny tafatafa tamin'ny dian'i Hamid Karzai nankany Farah.
Tamin'ny 9 Aprily, fahitalavitra Afghana Tolo News nanatontosa fandaharana tafatafa [fa] izay niresahana momba ny fitsidihan'i Karzai tao Farah. Nandritra ny fandaharana, nitsikera ny “fahalemilemin'i” Karzai amin'ireo Talibana sy ny lahateniny mampisara-kevitra ireo mpikomy ao Afghana sy ny tsy Afghana i Assadullah Sahadati, solombavahoaka. Nanamarika i Sahadati fa efa nilaza ny Talibana fa izy ireo no tompon'antoka tamin'ireo fanafihana. Nilaza ihany koa izy fa efa nitarika ady tamin'ireo mpitandro ny filaminana Amerikana ao amin'ny firenena ny tafika Pakistaney sy ny Afghana ao anatin'izany hetsika herisetra izany.
Tsy zava-baovao ny fikasan'i Karzai hamolavola fiarahamiasa miaraka amin'ny Talibana manoloana ireo fandrahonana avy any ivelany – niresaka matetika ireo “rahalahiny” ao amin'ny hetsika izy ary nanome tsiny an'i Pakistana noho ireo olana marobe ao amin'ny firenena. Na dia izany aza, mifanohitra amin'ny fanambaran'ny Talibana Afghana ny filazany, anisan'izany ny tao amin'ny habak'izy ireo. Taorian'ny fanafihana tao Farah, nanambara ny Talibana fa mbola hanohy hikendry hanafika ny Fitsarana ao amin'ny firenena izy ireo raha enjehina na miakatra fitsarana ny mpiady ao amin'izy ireo, eny fa na dia mpiady iray aza.
Niparitaka tao amin'ny media sosialy ihany koa ny vaovao. Dylan Welch (@dylanwelch) ohatra nisioka tamin'ny 5 Aprily:
@dylanwelch: Hoy ny #Talibana: mbola hiverina foana ny famonoan'olona ao Farah, hanohy hanafika ny fitsaran'ny governemanta sy ireo mpisolo vava izy ireo. #Afghanistan shahamat-english.com/index.php/paig…
Nandritra ny fandaharana resadresaka Tolo News, MP Sahadati nilaza [fa] hoe:
Efa nilaza foana ny solontena avy ao amin'ny Talibana Afghana fa izy ireo no tompon'antoka amin'ireo hetsika fampihorohoroana tahaka izao. Raha miaiky izy ireo fa tompon'antoka amin'izao loza izao ary milaza kosa ny filoha Karzai fa [tsy tokony omena tsiny izy ireo], sahiran-tsaina izahay hoe izay nambaran'ny Talibana ve sa izay nolazain'ny governemanta Afghana no hinoana.
Tamin'ny 8 aprily, taorian'ny nandefasan'ny Tolo News ny fandaharany tao amin'ny pejy Facebook-ny, mpisera Afghana iray ao amin'ny media sosialy, Farhad Adg Dost, nanontany hoe:
Mbola hovotsoran'i [Hamid Karzai] indray ve ireo mpanafika mpanao vy very ny ainy (kamikazy) (ireo rahalahiny) ao amin'ny fonjan'i Farah???
Mpisera Facebook hafa naneho hevitra [fa] tao amin'ny pejin'ny filoha Afghana izay misokatra ho an'ny daholobe:
Nanao fahadisoana ny fitantanan'ny prezidansa. Raha tena miahy fatratra ireo vahoaka Afghana tsy manan-tsiny izy, dia tsy tokony namotsotra ireo “rahalahy” mihitsy i Karzai, rahalahy izay mahavita heloka isan'andro. Manao izay ho afany ity olona tsy azo itokiana [Karzai] ity mba hamotehana ny firenena.
Raha nandefa tatitra momba ny fitsidihan'i Karzai tao Farah tao amin'ny pejy facebook-ny ny sampam-pahalalam-baovao Press tamin'ny 8 Aprily, niteraka fanehoan-kevitra mamaivay ny vaovao. Szamen Hemmat ohatra nanoratra [fa] hoe:
Angamba hilaza amin'ny vahoakan'i Farah i Karzai fa noho ny fahadisoany no anton'ny [fanafihana] hatramin'izay niantsoany foana ny Talibana mba hifampiraharaha sy handray anjara amin'ny fiainana ara-politika ao amin'ny firenena, tsy mahalala ny zava-misy izy fa manitsakitsaka ny maha-olombelona no fomba fiasan'izy ireo [Talibana]? Inona ihany koa no mety ho lazainy amin'ireo vahoaka??? Hangataka amin'ny vahoaka ve izy mba hamela azy noho ny zava-misy nandritra ny taompolo nitondrany, namono olo-tsotra sy Afghana tsy manan-tsiny marobe izy sy ireo “rahalahiny”? niaiky izy fa noho ny politikany sy ny politikan'ny Tandrefana narahiny no nahatonga izao?
Nandritra ny taompolo nanjakan'ny ady teo amin'ireo mpikomy sy ny governemanta Afgana, olo-tsotra an'arivony no namoy ny ainy sy norasaina ratsam-batana. Na dia izany aza, tsy olo-tsotra no fahitan'ny Talibana ireo olona voavono namoy ny ainy. Tamin'ny 14 Aprily, Ahmad Shuja (@AhmadShuja) nisioka hoe:
Nampanantena ny Talibana fa tsy hikasika na hamono ireo olo-tsotra mandritra ny fanafihana amin'ny lohataona. Kanefa mifanohitra amin'ny lalàna [iraisam-pirenena] ny famaritan'izy ireo ny antsoina hoe “olo-tsotra”.
Raha tsorina, izay olona tsy miaraka amin'ny [governemanta] na ny FIAS [Herim-piarovana Iraisam-pirenena], izany hoe ny mpitsara, ny mpiasa-panjakana, sns. dia tsy olo-tsotra tahaka ny Talibana tsirairay.
Matetika tafihan'ny Talibana ireo olona manohana sy miasa miaraka amin'ny governemanta Afghana na ny fikambanana iraisam-pirenena. Tamin'ny 8 Aprily, nilaza ny “Iraky ny Firenena Mikambana ao Afghanistana (UNAMA) fa nahitam-piakarana ny fahafatesan'ireo olo-tsotra tao amin'ny firenena nanomboka ny taona 2013. Araka ny filazan'ny UNAMA, olo-tsotra maherin'ny 200 no namoy ny ainy na naratra tao amin'ny faritanin'i Farah, Wardak, sy Kunar nandritra izay dimy volana izay.
Mandry tsy lavo loha ny mponina ao amin'ny firenena fa mety hiharatsy indray ny fandriampahalemana rehefa tafala ny tafiky ny OTAN amin'ny taona 2014. Satria efa hifarana tsy ho ela ny fe-potoam-piasan'ny filoha Karzai, manontany tena ny Afghana raha hanohy hiresaka amin'ireo lehilahy izay antsoin'i Karzai hoe “rahalahy” izay ho filoha vaovao ho tonga eo.